Thenga i-PolypodiuM I-powder Extract (9001-00-7) hplc =98% | AASraw
/ iimveliso / Utsalane lweZityalo / PolypodiuM I-powder Extract
SKU: 9001-00-7. Udidi: Utsalane lweZityalo
I-AASraw ikunye kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwi-PolypodiuM Extract powder (9001-00-7), phantsi kolawulo lweCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
The PolypodiuM Extract unempembelelo ebalulekileyo ekukhuseleni kweeseli ze-hepatocellular carcinoma kwi-vitro. Ukukhishwa kwamanqindi amanzi kunqanda ukuvuvukala kwegundane e-mouse okubangelwa yi-xylene kunye nokuvuvukala kweenyawo ezinqabileyo ezibangelwa yi-carrageenan, nto leyo inokuthi ibenqande ukukhanda iikhemikhali okanye intlungu yegundane. Umphumo wokunciphisa ishukela yegazi kunye ne-cholesterol kwizilwanyana.
PolypodiuM I-extract powder ividiyo
PolypodiuM I-extract powder esisiseko Abalinganiswa
igama: PolypodiuM I-extract powder
I-molecular Formula: C9H14N4O3
Isisindo somzimba: 226.23
I-PolypodiuM I-extract powder usetyenziso
I-PolypodiuM Extract (i-CAS 9001-00-7) nayo iyaziwa njengegama legama elithi SOLARICARE.
I-PolypodiuM Yongeza i-powder powder Usetyenziso
Uninzi lwophando lwe-Polypodium leucotomos i-extract leaf lwenziwa ngama-dosage malunga ne-240mg ukuya kwi-480mg ngosuku, nangona uphando olwenziweyo luye lwafunyanwa ngeziphumo ezibonwe kwi-dosage ye-80mg okanye i-120mg, kunye nezinye iimvavanyo kwi-720mg ngosuku okanye ngaphezulu. Isikhokelo esiqhelekileyo sibonakala sibe yimihla ngemihla malunga ne-7.5mg ngekg yomzimba womntu ngamnye. Ngomntu we-150 ipound, oku kuya kuba malunga ne-511mg ngosuku.
Isilumkiso kwiPolpodidiM Yongeza i powder eluhlaza
I-PLE izongezelo zisetyenziswe ngokubanzi kwiminyaka eyi-20 eYurophu, nakwezinye iindawo zehlabathi, ngaphandle kwemiphumo echazwayo. Akukho ziphumo ezichaphazelekayo ezihambelana ne-PLE ezithatyathwe ngomlomo njengezongezelelo zokutya.
I-Polypodium leucotomos yamacwecwe ekhutshiwe ibonise inzuzo xa ithathwa nge-supplementation yomlomo, kunye nakwinqanaba elithile xa lisetyenziselwa phezulu. Ngenxa yeenzuzo zayo zephotoprotective kaninzi zicetyiswa ukuba zithathe ngomlomo i-30 kumzuzu we-60 ngaphambi kokukhanya kwelanga, kanye kanye okanye ngamaxesha amaninzi ngosuku.
Indlela yokuthenga i-PolypodiuM I-extract powder (i-CAS 9001-00-7) esuka kwi-AASraw